ဝယျဖို့ ဘယျလို? HOW TO BUY | SaleAuto
SaleAuto > အော်တိုနှင့်စက်ယန္တရား AUTO and MACHINERY > ဝယျဖို့ ဘယျလို? HOW TO BUY
ကျွန်ုပ်တို့သည်အကြီးစားစက်ယန္တရား၊ ၀န်ချီစက်လက်တံ(tadano, unic အစရှိသဖြင့်) ၀န်ကိုမတင်၍သယ်ဆောင်သည့်မော်တော်ယာဉ်၊မြေတူးစက်များနှင့်ဆက်စပ်သောအစိတ်အပိုင်းများကို တစ်ကမ္စ္ဘာလုံးသို့တင်ပို့ပါသည်။ စစ်မှန်သောဂျပန်ဝန်ဆောင်မှုနှင့်နည်းပါးသောဝန်ဆောင်ခများကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့ကိုဖောက်သည်များကရွေးချယ်ကြပါသည်။
သင်သည်လူလိမ်နှင့်ဈေးနှုန်းကြီးမြင့်ခြင်းကိုရှောင်နိုင်လိမ့်မည်။ ပြီးတော့သင်ဟာကုန်ပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာပြဿနာမှရင်ဆိုင်ရမည်မဟုတ်ပါ၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်လေလံပွဲများတွင်ပြသထားသောကုန်ပစ္စည်းများမှာ၁၀၀%ရာနှုန်းပြည့်တရားဝင်ပြီးကျွမ်းကျင်သောပညာရှင်များကစစ်ဆေးပြီးဖြစ်ပါသည်။
၀န်ချီစက်လက်တံ၊ ၀န်ကိုမတင်၍သယ်ဆောင်သည့်မော်တော်ယာဉ်၊မြေတူးစက်များနှင့်လယ်ထွန်စက်များကိုပို့ဆောင်ပေးလိုပါကဤနည်းလမ်းသည်ရလာဒ်ကောင်းများရရှိစေနိုင်သောအကောင်းမွန်ဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်ပါသည်။ သယ်ယူပို့ဆောင်ရာတွင်ထိခိုက်မှုများမရှိအောင်၁၀၀%ကာကွယ်ပေးပါသည်။ အကြီးစားစက်ယန္တရားကိုစတီးလ်သေတ္တာထဲတွင်ထည့်၍သယ်ဆောင်ခြင်းဖြင့်ထိခိုက်မှုတစ်စုံတရာမရှိအောင်ကာကွယ်ပေးထားပါတယ်။
အဓိကအကြီးစားပစ္စည်းလေလံပွဲများ : ARAI, ISUZU UMAX.
Arai Oyama ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလေလံပွဲမှာ တစ်ပါတ်တွင်၁၀.၀၀၀ ထက်ပိုသောဝယ်သူများပါဝင်ကြပြီးသီးခြားစက်ယန္တရားကိုဝယ်ယူကြပါတယ်။ အပါတ်စဉ် ၄၀၀.၀၀၀ထက်ပိုသောပစ္စည်းများကိုအွန်လိုင်းလေလံပွဲတွင်ပြသထားပါသည်။ Araiအဖွဲ့ရှိအခြားလေလံပွဲများမှာ Arai Bayside, Arai Sendai and Arai Fukuoka တို့ပါဝင်ပါသည်။ Kobe မြို့ရှိအခြားထင်ရှားသောလေလံပွဲမှာ Isuzu U-max ဖြစ်ပြီးအပါတ်စဉ်တိုင်းသီးခြားပစ္စည်းရောင်းချပေးပါတယ်။ ဒီလေလံပွဲမှာသီးခြားစက်ယန္တရား၏ကုမ္ပဏီမျိုးစုံ၊ပစ္စည်းမျိုးစုံ၊ မှန်ကန်သောဈေးနှုန်းများနှင့်လေလံပွဲကာလတွင်ဂရုတစိုက်စစ်ဆေးမှုတို့ဖြင့်ထောက်ပံ့ပေးထားပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ကုပ္မဏီသညသင့်ကိုအဲဒီအချက်တွေရရှိအောင်ထောက်ပံ့ပေးထားပါသည်။ Kato နှင့် Nippon Shyaryouမှထုတ်လုပ်သောလွန်ပူစက်နှင့်ဝန်ချီစက်ပစ္စည်းများ၊ Komatsu, Hitachi, Kobelco, Tadano, KATO, IHI မှထုတ်သောအကြီးစားစက်ယန္တရား၊ မြေတူးစက်များ၊ ၀န်ကိုမတင်၍သယ်ဆောင်သည့်မော်တော်ယာဉ်များနှင့် Mitsubishi, Niigata, Sumitomo, Hanta, Sakai, Komatsu, Hitachi မှထုတ်လုပ်သောအထူးသီးသန့်စက်ယန္တရားတို့ကိုလည်းဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။